निस्वार्थ नेटवर्कि Aboutको बारेमा स्वार्थी हुनुहोस् | Martech Zone
शुक्रबार, फेब्रुअरी 12, 2010 आइतवार, फेब्रुअरी,, २०१9Douglas Karr
यस हप्ता मैले केहि व्यवसायहरूसँग कडा कुराकानी गरें जसको म गहिरो चासो राख्छु। उनीहरू जान्दछन् कि म ख्याल गर्दछु किनकि मैले तिनीहरूलाई काममा लगाएको छु र जवाफदेही राखेको छु। मेरो नेटवर्क मेरो लगानी हो र जहाँ म लगानी मा सबै भन्दा फिर्ती प्राप्त।
टेक्नोलोजी फर्महरू मसँग सँधै काम गर्दछु मँबाट सँधै पैसा कमाउँछु। I सधैं समस्याहरू, विचार र कुडो तिनीहरूको टीममा रिपोर्ट गर्नुहोस्। प्रत्येक व्यक्तिले गुनासो गर्दा, त्यहाँ सयौं मानिसहरू छन् जसले केवल तपाईंलाई छोड्छन् र अर्को विक्रेता फेला पार्दछन्। यो महत्वपूर्ण छ कि, यदि तपाइँ तपाइँका समाधान प्रदायकहरूको ख्याल गर्नुहुन्छ भने, तपाइँसँग के गल्ती भयो वा किन त्यसमा उनीहरूसँग गाह्रो कुराकानीहरू छन्।
त्यहाँ धेरै नेटवर्क उपकरणहरू र समुदायहरू हुन्। नेटवर्कि ex रमाइलो र थकाउने छ। एउटा सानो व्यवसायको रूपमा, मेरो नेटवर्क मेरो सफलताको लागि महत्वपूर्ण छ। जो म आफैंलाई घेराउछु मेरो व्यवसायमा झल्काउँछ र ब्यापारमा पनि ल्याउँछ। मेरा केहि नेटवर्कहरू निस्वार्थ छन् - व्यवसायलाई मेरो अनुहारमा धकेल्न सधैं उनीहरूले उत्तम गरिरहेछन्। म bणी महसुस गर्छु र सँधै सहमति फिर्ता गर्न अवसरहरू लिन्छु। केहि स्वार्थी हुन्, र केवल हाम्रो सम्बन्ध मापन गरीन्छ जुन मैले तिनीहरूलाई प्रदान गरेको छु।
सामाजिक मिडिया एक विशाल जाल कास्ट गर्दछ। मैले निरन्तर मूल्याating्कन गरिरहेको छु कि मसँग अर्को कुन ठाउँमा बोल्नु पर्छ, तिर्नु पर्छ कि हुँदैन, वा मैले आफ्नो तालिकामा समय र पैसा निकाल्नु पर्छ कि पर्दैन। म लेख्न र प्रचार गर्न प्लेटफार्म समीक्षा गर्दछु। म ब्लगि vers बनाम भिडियो बनाम पोडकास्टि aboutको बारेमा सोच्छु। म अन्य साइटहरूमा टिप्पणी गर्ने र उद्योग नेताहरूसँग जडानको बारेमा सोच्छु। यो धेरै काम गर्दछ।
एक सल्लाहकारको रूपमा, मसँग 'आवर्ती राजस्व' थोरै कम छ, त्यसैले मेरो अधिकतम आय मेरो समय बेच्ने मार्फत आर्जित हुन्छ। यसको मतलव भनेको कफीको प्रत्येक कप, फोन कल वा ईमेलले मलाई आय गुमाउने जोखिमको साथ प्रतिक्रिया गर्दैछु।
जिज्ञासु: हामीले एक अर्कासँगको प्रत्येक बैठकको लागि एक अर्कालाई तिर्नुप if्यो भने हामी कती फलदायी हुन सक्छौं। यदि मैले तपाईंलाई कफि लिन बोलाउछ भने, के हुन्छ यदि मैले तपाईंको प्रति घण्टा दर तिर्नु पर्छ भने। के म तपाईंलाई अझै कफीको लागि कल गर्छु?
यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईं आफ्नो नेटवर्कलाई स्थिर आधारमा मूल्याate्कन गर्नुहोस् कि तपाईं कहाँ लगानी गरिरहनु भएको छ र यसको भुक्तानी हुनेछ वा हुँदैन। व्यवसाय भनेको व्यवसाय हो। निस्वार्थ नेटवर्क खोज्ने बारे स्वार्थी हुनुहोस्। म सफल हुन सक्दिन यदि यो मेरा मुख्य ग्राहकहरूको लागि होईन - कम्पेन्डियम, ChaCha, वेबट्रेंडहरू र वाकर जानकारी त्यो सूचीमा छन्। "कुञ्जी" बाट, मेरो मतलब राजस्व;)।
जब म ती सम्बन्धहरू र उनीहरूको विकासको बारेमा सोच्दछु, तिनीहरू सबै एकल उद्यमी - क्रिस बगगटसँगको मेरो सम्बन्धबाट विकसित भयो। तपाईंहरू जो क्रिस र मलाई चिन्नुहुन्छ उनीहरूलाई थाँहा छ कि हामी एक अर्काको लागि ठूलो सम्मान गर्दछौं - र हामी दुवैले एक अर्कासंग धेरै इमान्दार छौं। क्रिस उपभोग्य ईन्जेललिस्ट हो - जहिले पनि आफ्ना कम्पनीहरूलाई स्पटलाइटमा लाउन कडा मेहनत गर्दै ... त्यो स्वार्थी देखिन्छ। जब म मेरो सफलता र मेरा ग्राहकहरूको सूचीमा हेर्छु, यद्यपि ती सबै क्रिससँगको मेरो सम्बन्धमा वर्षौं बितेको छ।
तपाईं कहाँबाट ग्राहकहरू प्राप्त गर्नुहुन्छ? तपाईं कहाँबाट तपाईंको व्यवसायको लागि नेतृत्व लिनुहुन्छ? तपाईं कसको लागि आफ्नो णी छ? के तपाई पक्षमा फर्किदै हुनुहुन्छ? जब तपाई यसलाई निकाल्नुहुन्छ तपाई छक्क पर्नुहोला।
एउटा अन्तिम नोट: यो पोष्ट अन्य कुनै पनि व्यक्तिलाई हल्का पार्नको लागि हो जुन मेरो व्यवसायको सफलता र बृद्धिको लागि यत्तिको महत्त्वपूर्ण छ। तपाईंलाई थाहा छ तपाईं को हुनुहुन्छ! मेरो मतलब केहि प्रकाश बहाउनु हो जुन हामी मध्ये कोही वास्तवमै मूल्यांकन गर्दैनौं र हाम्रो नेटवर्कमा मान्छेहरु लाई प्रदान गर्ने वास्तविक व्यवसाय को लागी उनीहरूलाई मूल्यवान्। मलाई लाग्छ कि मैले क्रिससँगको मेरो सम्बन्धलाई हल्का रूपमा लिएको छु र उहाँ मेरो लागि कत्तिको महत्त्वपूर्ण हुनुहुन्छ भनेर चिन्न सकेन।